မူးယစ်ဆေး စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ပြည့်သူ့စစ် ခေါင်းဆောင်ကို ဖမ်းပေးရန် ထိုင်းတောင်းဆို | ဧရာဝတီ
သန်းထိုက်ဦး| October 26, 2012 | Hits:5,513
3 | | ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့နယ် ရေပူစမ်းကျေးရွာ အခြေစိုက် လားဟူ ပြည်သူ့စစ် ခေါင်းဆောင် ဦးယင်ဆေး (ထိုင်းအမည် Chaiwat Pornsakulpaisal) ကို မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးပေးရန် မြန်မာအစိုးရထံ တောင်းဆိုထားကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ မူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်းချုပ်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့ (ONCB) က တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီခံရသည့် ထိုင်းရဲအရာရှိ (ယာစွန်) က ဦးယင်ဆေး (ပုံသေး) ထံမှ စိတ်ကြွဆေးပြားများ ရရှိသည်ဟု ထွက်ဆိုခဲ့သည် (ဓာတ်ပုံ – Khaosod)
ဘန်ကောက်မြို့တွင် ထိုင်းရဲ အရာရှိ တဦးထံမှ စိတ်ကြွဆေးပြား ၁.၂၈ သန်းကျော် ဖမ်းဆီးရမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ယမန်နေ့က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ONCB အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒု ရဲချုပ် Pongsapat Pongcharoen က ထိုသို့ ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
အဖမ်းခံထားရသည့် ရဲအရာရှိ မာနတ် ဆိုဖုန်း ( Manas Seupho ) ဆိုသူက ယင်း စိတ်ကြွ ဆေးပြားများကို တာချီလိတ် မြို့နယ်ရှိ ပြည်သူစစ် ခေါင်းဆောင် ဦးယင်ဆေး ထံမှ ရရှိသည်ဟု ထွက်ဆိုကြောင်း ၎င်း ဒု ရဲချုပ် Pongsapat Pongcharoen က ဆိုသည်။
ဘန်ကောက်မြို့ ပရာချာချု ရဲစခန်းမှ ယာဉ်ထိန်းရဲ အရာရှိ မာနတ် ဆိုဖုန်းနှင့် အတူ စိတ်ကြွဆေးပြား သယ်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက် နေသည့် ထိုင်းရဲ အရာရှိတချို့ အပါအဝင် ထိုင်းနိုင်ငံသား ၉ ဦးကိုလည်း လိုက်လံ ဖမ်းဆီးနေကြောင်း သိရသည်။
“ထိုင်း အာဏာပိုင် တွေအနေနဲ့ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ယူသွားပြီး မြန်မာနိုင်ငံက မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့က သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး Chaiwat (ဦးယင်ဆေး) ကို ဖမ်းဆီးနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းသွားမယ်” ဟု ဒု ရဲချုပ် Pongsapat က ပြောသည်။
လတ်တလောအတွင်း ဦးယင်ဆေးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့က ဆုငွေ ဘတ် ၁ သန်း ထုတ်ထားရာမှ ယခု ဘတ်ငွေ ၂ သန်း အထိ ဆုငွေ တိုးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုငွေ ထုတ်ထားသည့် ၂၅ ဦးထဲတွင် ဦးယင်ဆေးလည်း ပါဝင်သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့မှ ဦးခွန်စိုင်းကမူ ထိုင်းအာဏာပိုင်များအနေနှင့် ဦးယင်ဆေးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် လတ်တလောတွင် မလွယ်ကူသေးကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အခုလောလောဆယ်မှာ မြန်မာအစိုးရအတွက် သူ (ဦးယင်ဆေး) က အကျိုးစီးပွား ဖြစ်နေသေးတယ်။ ဒီတော့ သူ့ကို ဖမ်းဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူးလို့ ထင်တယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ လဆန်းပိုင်းကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ အနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း အောင်မြင်မှု မရခြင်းသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ တဆင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်နိုင်သော ဓာတုဆေးဝါးများကို ရယူ၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ထိုင်း ဒု ၀န်ကြီးချုပ် ချလုံ ယူဘမ်ပရုန်းက စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တချို့သော တိုင်းရင်းသားလ က်နက်ကိုင် ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့များက ထုတ်လုပ်နေကြပြီး တာချီလိတ်မြို့မှတဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ သယ်ပို့ရောင်းချနေကြောင်း သတင်းဖော်ပြချက်များအရ သိရှိရသည်။
မြန်မာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသားတို့ထံမှ စိတ်ကြွဆေး ၂ သိန်း ဖမ်းမိ
မြန်မာ ၃ ဦး ထိုင်းနယ်စပ်တွင် မူးယစ်မှောင်ခိုမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရ
3 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website WAI lI SHINN October 26, 2012 - 6:19 pm	U Khun SaI,YoU jUST WaNT tO cOVEr FOr” nAW KhAN”.WhY YoU hate U Yin SaE?BecausE he is nota…..?yOU sHOULDn’T wORK fOR tHIS “wAITING aND wATCHING gROUP” If yOUR nOT A fAIR gUY.I hOPE,yOU KnOw wHAT i sAId.
Reply	kyawmoe October 27, 2012 - 11:51 am	လူမျိူးရေးခွဲခြားနေရင် ပြဿနာတိုင်း မှ အဖြေမှန် မရနိုင်
Reply	TaungPawThar November 1, 2012 - 3:58 pm	မိမိနိုင်ငံသားမဟုတ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးကို ယခုကဲ့သို့ထိုင်းမူယစ်ဒုရဲချုပ် Lt,Gen; Pongsapat Pongcharoen မှ ၀ရမ်း ဘတ်(၂)သန်းထုတ်ခြင်းမှာ လူတဖက်သား၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို မဟုတ်မမှန် အပုပ်ချ ၍မထီမဲ့မြင်ပြုရာကျပါသည်။
မိမိနိုင်ငံသားကို အရေးမယူနိုင်သဖြင့် တဘက်နိုင်ငံသားကို လက်ညှိုးထိုး မတရားစွပ်စွဲခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ယူဆပါသည်။